जेठदेखि १ देखि सूर्य मेष राशीवाट वृष राशीमा गोचर : कुन राशिलाई कस्तो असर ? जान्नुहोस्
गृहपृष्ठ » आजको राशिफल » मासिक राशिफल » जेठदेखि १ देखि सूर्य मेष राशीवाट वृष राशीमा गोचर : कुन राशिलाई कस्तो असर ? जान्नुहोस्
मङ्गलबार ३० ब‌ैशाख, २०७७
काठमाडौं । आउँदो बिहिवार अर्थात जेठ १ मा सूर्य मेष राशीवाट वृष राशीमा प्रवेश गर्दैछ । यस दिनलाई वृष सक्रान्ति, भ्रिसव सक्रंमण र ब्रुश सक्रान्ति पनि भनिन्छ । जानकारी अनुसार वृषमा ३० दिन रहने देखिएको छ । तर यस्को असर वृषलाई मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन । वृषसहित अन्य राशीमा आउँने परिवर्तनबारे आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौ । वृष, कर्कट, सिंह, कन्या, धनु र मीन राशी हुनेहरुका लागि शुभ समय सुरु हुन सक्छ । यी राशी भएकाहरुले पैसा लाभ र प्रगति प्राप्त गर्न सक्छन् । समय स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुनेछ । यी बाहेक, समय वृश्चिक र कुम्भ राशी भएकाहरुका लागि सामान्य हुनेछ । मेष, मिथुन, तुला र मकर भएको व्यक्ति लगभग एक महिनाको लागि स्थिर हुनुपर्दछ । पैसा हराउन सक्छ, यो समय स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो नहुने देखिएको छ । आउँनुहोस् कुन राशीमा के प्रभाव पर्छ चर्चा गरौं…
मेष चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ । आँखा र टाउको दुख्ने हुन सक्छ। यसले तपाँईको व्यवहार परिवर्तन गर्न पनि सक्दछ । यी दिनहरूमा तपाँईले कुराकानी गर्दा होशियार हुनुपर्दछ । विचारपूर्वक बोल्नु पर्छ । सुर्यको प्रभावको कारण खर्च बढ्न सक्छ । बचत पनि अन्त्य हुने सम्भावना छ। प्रेम जीवन र विवाहित जीवनको लागि समय राम्रो हुनेछ। बच्चाहरूसँग सम्बन्धित चिन्ता हटाउन सकिन्छ। नयाँ योजनाहरु पनि गठन गर्न सकिन्छ।
बृष इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) सुर्यको प्रभावका कारण पैसामा फाइदा हुनेछ । सम्पत्ति मामिलाले पनि फाइदा लिन सक्छ । आमाको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता समाप्त हुनेछ, किनकी आमाको पुरानो समस्या पनि हट्नेछ । दैनिक कार्यहरू समयमै सिध्याउन सफल हुने देखिन्छ । सम्पन्न भएका कार्यहरूले पनि फाइदा दिन सक्दछन् । यी दिनहरूमा, व्यक्तिहरू भेट्न र अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन् । सहयोगी अधिकारीहरूबाट आफुले चाहेको काम प्राप्त गर्न सकिन्छ । वैवाहिक जीवनमा तनाव बढ्न सक्छ । स्वास्थ्यको बारेमा सावधान हुनुहोला ।
मिथुन का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) सूर्यको प्रभाव तपाँईको लागि राम्रो हुँदैन । यस कारण, खर्च बढ्न सक्छ । शत्रुहरूले कष्ट दिन सक्छन् । स्वास्थ्यको हिसाबले पनि समय राम्रो हुँदैन । यो समयमा ज्वरो, टाउको दुख्ने र आँखाको समस्या हुनेछ । यी दिनहरूमा, तपाइँ कुनै पनि अवैध र गलत काम गर्नबाट अलग रहनु पर्छ । सँगै काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको सहयोग प्राप्त गर्ने छैनन्। यसले तपाँईको समस्याहरू बढाउन सक्छ। समय तनावपूर्ण हुनेछ। प्रेम जीवन र विवाहित जीवन सामान्य हुनेछ।
कर्कट हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) सूर्यको प्रभावका कारण समय तपाँईको लागि राम्रो हुनेछ। यी दिनहरूमा पैसाको लाभ हुन सक्छ। नयाँ योजनाहरू बनाइनेछन्। तिनीहरू मा काम गरिनेछ र तपाँई पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । बच्चा सम्बन्धित मामिलामा राहत हुनेछ। आफ्नो बच्चा संग राम्रो समय बिताउन पाउनुहुनेछ । तपाँईको कुनै इच्छा पूरा हुन सक्छ। अफिसरहरूले रोजगार र व्यवसायमा मद्दत लिन सक्दछन्। तपाँईको काम र योजनाहरूको तारिफ गर्न पाउँन सक्नुहुनेछ । प्रेम जीवनको बारेमा सावधान हुनुपर्दछ । तपाँई लाभदायक लगानीहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ ।
सिंह मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) सूर्य परिवर्तन हुँदा तपाँईको स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। तपाँईको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्न सक्छ। पुरानो समस्याहरूको अन्त्य हुन सक्छ। महत्वपूर्ण सम्पत्ति सम्बन्धी मामिला उठ्न सक्छ। तपाँई पनि तिनीहरूबाट लाभ हुनेछ। तर, आमाको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता हुनेछ। रोजगार भएका व्यक्तिहरूले पदोन्नति पाउँन सक्दछन्। व्यापार पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। ठूला मानिसहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। सूर्यको प्रभावबाट तपाँई सम्मानित हुन सक्नुहुन्छ। खुशी पनि बढ्नेछ। परिवारमा शान्ति रहनेछ।
कन्या टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) सूर्यको कारण रोगहरूसँग लड्न तपाँई सामर्थ्य पाउनुहुनेछ। समय स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुनेछ यी दिनहरूमा, तपाँई व्यर्थ खर्च नियन्त्रण गर्नुहुनेछ। तपाँईको बचत बढ्न सक्छ। टाढा बस्ने महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूले अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्। तपाँईले उनीहरूबाट समर्थन पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाँईको सम्मान बढ्नेछ । तपाँईले कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ र तपाँईले पूरा लाभ पनि पाउन सक्नुहुनेछ। तपाँई आफ्नो स्तर भन्दा तलका व्यक्तिहरूबाट मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। तर, बुबाको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता हुनेछ।
तुला र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) सुर्यको प्रभावका कारण तपाँईले सावधानी अपनाउनु पर्ने छ । यस समयमा, तपाँईको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। शरीरको ताप बढ्न सक्छ। सरकारी काममा अलमल हुन सक्छ। प्रशासनले सहयोग गर्ने छैन। यी दिनहरूमा पैसा हराउन सक्छ। तपाँईले पनि कडा परिश्रम गर्नुपर्ला। बुबाहरू र अन्य पाको व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। यो समयमा विवादको सम्भावना छ। होशियार हुनु पर्छ। यस समयमा कुनै पनि नयाँ र महत्त्वपूर्ण काम सोचविचार गरेर मात्रै गर्नुपर्दछ।
बृश्चिक तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) सूर्यको प्रभावको साथ तपाँईका लागि समय मिश्रित हुनेछ। यस समयमा तपाँईले पैसा कमाउनु हुनेछ, तर तपाँईले यसको खुशी प्राप्त गर्नु हुने छैन। नयाँ र ठूला कार्यहरूको लागि उत्तरदायित्व भेट्टाउन सकिन्छ। तपाँईको विवाहित जीवनमा समस्या हुनेछ। तपाँईले कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ तर तपाँईलाई कुनै फाइदा हुने छैन। सुर्यको प्रभावका कारणले गर्दा स्वास्थ्यको बारेमा सावधान हुनुपर्नेछ । टाउको दुख्ने र आँखाको समस्या हुन सक्छ। तपाँईको स्वभावमा आक्रमकता बढ्न सक्छ। वैवाहिक जीवनमा तनाव बढ्नेछ। खुशी कम हुन सक्छ।
धनु ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) सूर्यको प्रभाव तपाँईको लागि राम्रो समय हुनेछ । तपाँई यी दिनमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो समयमा तपाँईको ऋण समाप्त हुने देखिन्छ । आर्थिक स्थिति विस्तारै सुधार हुनेछ। पैसा पाउने सम्भावनाहरु देखिएको छ । सूर्यको कारण, कडा परिश्रम अधिक हुनेछ र तपाँईले लाभ पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। दुश्मनहरूमाथि जित हासिल गर्न सकिन्छ। कामकाजको भ्रम हटाइनेछ। रोकिएको काम फेरि सुरु हुनेछन् । तर, स्वास्थ्य को बारे मा सावधान हुनुहोला ।
मकर भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) सुर्यको प्रभावका कारण तपाँई बच्चाहरूलाई लिएर थप सावधान हुनुपर्दछ। बच्चाहरूसँग सम्बन्धित समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । बच्चाको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। तपाँई पनि यी दिनहरूमा केहि गोप्य योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूमा काम गर्दा तपाँईको समय बिर्गन सक्छ। यद्यपि यी दिनहरूमा तपाँई पैसा पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ, तर तपाँईले सोचविचार गरेर लगानी गर्नुपर्नेछ। प्रेम जीवनमा तनाव बढ्न सक्छ। तपाँईको योजनाहरू यी दिनहरूमा अपूर्ण रहन सक्छ।
कुम्भ गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) सूर्यको प्रभावले तपाँईको खुशी बढ्नेछ। श्रमिकहरू र व्यवसायिकहरू काममा पूर्णतया केन्द्रित हुनेछन्। तर, यी दिनहरूमा मानसिक तनाव बढ्नेछ। आमाको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता हुनेछ। पारिवारिक तनाव सूर्यको प्रभावको साथ बढ्न सक्छ। जीवनसाथीको कामबाट तपाँई लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक कार्यहरूको बारेमा चिन्तित भइनेछ । स्वास्थ्य मामिलामा पनि तपाँई होशियार हुनु पर्छ। महत्वपूर्ण सम्पत्ति मामिलाहरू यो दिन आउन सक्छन् ।
मीन दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) सूर्यको प्रभाव तपाँईको लागि राम्रो हुनेछ । कर्मचारीहरू र व्यवसायिक व्यक्तिहरू लगनशील भई काम गर्नेछन् । जस्ले कडा परिश्रम गर्दछन्, उनीहरुलाई नै फाइदा हुने देखिन्छ । धेरै मामिलाहरुमा यी दिन तपाँई भाग्यशाली हुन सक्नुहुन्छ। तपाइँको प्रभाव संग शत्रुहरु हार खानेछन् । यात्राको योग देखिन्छ तर तपाँई सावधान हुनुहोला । सूर्य परिवर्तन हुँदा पुराना साथीहरुलाई भेट्न पाइनेछ । उनीहरुले पनि मद्दत गर्न सक्छन् । यदि तपाइँ उक्त समयमा योजना बनाउनु हुन्छ र काम गर्नुहुन्छ भने तपाँई सफल हुनुहुनेछ ।
मासिक राशिफल : सेप्टेम्बर महिना शुरु, यी राशिका दिन उल्टिए, जान्नुहोस् कसको भाग्य चम्किन्छ
अब एक महिनामा यी राशिको जीवन बन्दैछ अति सुखमय, कारक ग्रह आएर घरमा बस्यो
२०७७ असार महिनाको मासिक राशिफल
यो दुर्लभ संयोगका कारण बाँकी भाद्र महिना भरी यी राशि बन्देछन् मालामाल [मासिक राशिफल]